Komishanka Cusub ee Doorashooyinka Somaliland oo loogu baaqey inay iscasilaan | Qaran News
Komishanka Cusub ee Doorashooyinka Somaliland oo loogu baaqey inay iscasilaan
Writen by Qaran News | 10:14 am 16th Nov, 2019
Inay ka go’naato inay ka qayb-galaan doorashooyin lagu qabto xiligooda oo ay u muujiyaan rabitaan in kor loo qaado qiyamka dimoqraadiyadeed.
Inay ixtiraamaan dasatuurka iyo isku xukunka sharciga;
Inay ixtiraamaan baahida shacabka u qabo inay codeeyaan si ay u helaan cid cusub oo ku metesha Baarlamaanka iyo golayaasha deegaanada;
Inay wax ka qabtaan cabashooyinka mucaaradku ka qabo Gudida Doorashooyinka;
Inay la yimaadeen hab feker cusub oo hal abuur leh oo mudnaanta siinaya in la qabto doorashooyinka raagay si loo af jaro dib u dhaca doorashooyinka iyo mudo kordhimaha la caadaystay iyo in la badbaaadiyo dimoqraadiyadda dalka.
Inay ka ciyaaraan door firfircoon geedi socodka dimoqraadiyada iyo inay xisaabiyaan madaxda. Bulshada rayidka ahi waa inay la saftaan xuquuqda aasaasiga ah ee shacabku u leeyihiin inay codeeyeen iyo inay ka qayb qaataan si loo ilaaliyo mabaadida dimoqraadiga ah iyo in la ilaaliyo dastuurka.
Ixtiraama isku xukunka sharciga iyo dastuurka;
Ixtiraama dadka idin doortay 2005 oo taageera dadaalka loogu jiro in la helo xubno cusub.
Inaad iska fadhidaan kuraasta baarlamaanka iyada oo aan doorasho dhicin waxaay ka soo horjeedda dastuurka, waxaayna su’aal gelinaysaa dimoqraadiyadda Somaliland iyo sharcinimada hay’adaha dalka.
Waxaanu kula talinaynaa xubnaha Baarlamaanka inay ixtiraamaan dimoqraadiyadda oo ay baneeyaan kuraasta.
Golaha Guurtid waa inaanay samayn kordhin cusub.
Ixtiraama isku xukunka sharciga;
Xilkii la idiin doortay wuu dhacay, mana jirto korodhsiimo la idin siiyay. Faldan ixtiraama shacabkii idin doortay shanta sanadood oo ka bilaabmayay sanadkii 2012.
Baneeya kuraasta oo xilka ku wareejiya xogahayayaasha fulinta.